Ankoatra an’i Mozambika dia i Cameroun, izay hihaona amintsika amin’ny sabotsy izao no mameno ny vondrona ho firenena telo. Eo amin’ny vehivavy indray dia i Nizeria sy Congo no miaraka amin’ny vondrona amintsika.
Azo heverina ho fisehoana goavana indray eo amin’ny lalao afrikanina ny handraisantsika anjara rehefa tsy hita tao anatin’ny 24 taona.
Ny ekipan’i Congo no hifanandrina voalohany amin’i Madagasikara amin’ny sabotsy ho avy izao eo amin’ny sokajy vehivavy. Ny ampitson’io kosa i Nizeria no mihaona amintsika amin’izany. Noho ny fanohanan’ny minisiteran’ny Fanatanjahantena sy ny Komity olympika malagasy no nahafahantsika nandray anjara tamin’izany.